Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Cromolyn (ခရိုမိုလင်း)
Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
၎င်းကို ဝမ်းလျှောခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန် ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ အရေပြား ယားယံခြင်း၊ အရေပြား နီရဲပူနွေးခြင်း စသည်တို့ကို ဖြစ်စေ နိုင်သော mastocytosis ကို ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။
ပန်းနာရောဂါ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓါတ်မ တည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အသက်ရှူကြပ်ခြင်း တို့၏ လက္ခဏာများကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ထိုလက္ခဏာများမှာ အသက်ရှူ မြန်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသံမြည်အောင် အသက်ရှူခြင်း၊ ရင်ဘတ် တင်းကျပ်ခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။
ဓါတ်မတည့်သည့် အချို့ မျက်လုံးအခြေအနေများ (vernal keratoconjunctivitis, vernal conjunctivitis, vernal keratitis) ကို ကုသရန် သုံးသည်။ ထိုအခြေအနေ များတွင် ဖြစ်နိုင်သော မျက်လုံးယားယံခြင်းကို ကာကွယ် ပေးသည်။
Cromolyn ကို အခြားနေရာများတွင်လည်း အသုံးပြု နိုင်သည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းပါ။
Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အစာမစားမီ ၁၅-၂၀ မိနစ်တွင် ဤဆေးကို သောက်ပါ။ ဆေးတောင့်ကို ကြိတ်ချေခြင်း၊ ချိုးခြင်း၊ ဝါးစားခြင်း မပြုသင့် ပါ။ cromolyn ကို ရေတစ်ဖန်ခွက်ဖြင့် မျိုချပါ။
Cromolyn ကို အသက်ရှူစက်ဖြင့် ရှူသွင်းခြင်း
ဆေးပုလင်းကို ခွဲပြီး ဆေးကို အသက်ရှူစက်၏ chamber သို့ ထည့်ပါ။ နှာခေါင်းအုပ်ကို ဆေး chamber နှင့် ဆက်ပါ။ ထို့နောက် ဆေး chamber ကို compressor နှင့်တွဲပါ။
သက်တောင့်သက်သာပုံစံဖြင့် မတ်မတ်ထိုင်ပါ။ နှာခေါင်းအုပ်ကို နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ် လုံအောင် တပ်လိုက်ပါ။ compressor ကို ဖွင့်ပါ။
အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းရှူသွင်းပါ။ ဆေးများအားလုံး ကုန်သည်အထိ ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန်ရှူပါ။ အသက်ရှူစက်တွင် အငွေ့များ မရှိသည်အထိ ၊ဆေး chamber ကုန်သည်အထိ ပြုလုပ်ပါ။
တစ်ခါ အသုံးပြုပြီးတိုင်း အသက်ရှူစက်ကို သန့်စင် ပါ။ အသက်ရှူစက်တွင်ပါသော သန့်စင်မှု ညွှန်ကြား ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
Cromolyn ကို metered-dose ရှူဆေးဘူး ဖြင့် ရှူခြင်း
ရှူးဆေးဘူး၏ ရှူသွင်းတံကို အဖုံးချွတ်ပါ။ ရှူးဆေး ဘူးကို ညင်သာစွာ လှုပ်ခါပါ။
အသက်ကို အပြည့်ရှူထုတ်ပါ။ ရှူသွင်းတံကို ပါးစပ် ထဲထည့်ပြီး ပါးစပ်ကို ပိတ်ပါ။ ရှူသွင်းတံကို လျှာဖြင့် မပိတ်ပါနှင့်။ ခေါင်းကို နောက်စောင်းပြီး ရှူဆေးဘူး၏ ထိပ်ကို နှိပ်ရင်း ဖြည်းညင်းစွာ ရှူသွင်းပါ။ ပါးစပ်မှ ရှူသွင်းတံကို ထုတ်ပြီး စက္ကန့် အနည်းငယ်ကြာ အသက်အောင့်ထားပါ။ ထို့နောက် ဖြည်းညင်းစွာ ရှူထုတ်ပါ။
ရှူဆေးဘူးကို ဖြုတ်၍ နှစ်ပတ်တစ်ခါ သန့်စင်ပါ။ ရှူးသွင်းတံကို နွေးသော ဘုံဘိုင်ခေါင်းမှ ရေဖြင့် ဆေးကြောပါ။ ရှူဆေးဘူးကို ပြန်မတပ်ခင် အစိတ် အပိုင်းများကို အခြောက်ခံပါ။ ဆေးထည့်သည့် ခွက်ကို ရေထဲ မထည့်ပါနှင့်။
မျက်စဉ်း အသုံးပြုရန် သင့်လက်ကို အရင်ဆေး ကြေပါ။
ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်စေရန် အစက်ချအတံကို မထိပါ နှင့်။ ၎င်းကို မျက်လုံး သို့မဟုတ် အခြား မျက်နှာပြင် နှင့် လည်း အထိပါစေနှင့်။
ဤဆေး အသုံးပြုစဉ် မျက်ကပ်မှန် တပ်ခြင်းကို ရှောင်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ခေါင်းကို နောက်သို့မော့ပါ။ အပေါ်ကို ကြည့်ပြီး အောက်မျက်ခွံကို ဆွဲပါ။ အစက်ချတံကို မျက်လုံး ပေါ်တွင် ကိုင်ထားပြီး အစက် ၁စက်ချပါ။ အောက်ကို ကြည့်ပြီး ၁ မိနစ် ၂မိနစ်ခန့် မျက်လုံး ကို ညင်သာစွာ ပိတ်ပါ။ လက်ချောင်း တစ်ချောင်းကို နှာခေါင်းအနီး မျက်လုံးထောင့်တွင် ထားပြီး ညင်သာစွာ ဖိပေးပါ။ ၎င်းသည် ဆေး မျက် လုံးထဲမှ စီးထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မည်။ မျက်တောင်ခတ်ခြင်း၊ မျက်လုံးကို ပွတ်ခြင်း မပြုပါ နှင့်။ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ခတ်ရပါက ဤ အဆင့် များအတိုင်း ပြန်လုပ်ပါ။
အစက်ချတံကို ရေမဆေးရ။ တစ်ခါ အသုံးပြုပြီး တိုင်း အစက်ချတံ အဖုံးကို တင်းကျပ်စွာ ပြန်ပိတ် ပါ။
Cromolyn အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါက ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Cromolyn ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Cromolyn ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Cromolyn တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များ အတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Cromolyn ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင့်တွင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါး ပညာရှင် နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Cromolyn သို့မဟုတ် အခြားဆေးများတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
အစားအစာများ၊ ဆိုးဆေးများ၊ တိရစ္ဆာန်များ စသည်တို့ဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရှိပါက
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Cromolyn သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Cromolyn မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Cromolyn သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစား အသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်။
မိခင်နို့တွင် စွန့်ထုတ်သလား မသိရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သတိ ထား၍ အသုံးပြုပါ။ သင်သည် ကိုယ်ဝန်ရှိပါက သို့မဟုတ် နို့တိုက်နေရပါက ဤဆေးမသုံးမီ ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အဖုအပိမ့်ထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း/ရောင်ရမ်းခြင်း ( အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း) စသော ဓါတ်မတည့်သည့် တုံ့ပြန်မှုများ
ဘယ်ဆေးတွေက Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cromolyn သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Cromolyn သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cromolyn သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။
သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ ဖြစ်သည်။
နှလုံးကို ထောက်ပံ့သော သွေးကြောရောဂါ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Mastocytosis : သောက်ဆေး ၂၀၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ လေးကြိမ်။ အစားမစားမီ မိနစ် ၃၀ အလို တွင် သောက်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများကို ၂-၃ ပတ် အတွင်း မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက ဆေး အချိုးကို တစ်နေ့ ၄၀ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် အထိ တိုးပေးနိုင်သည်။
အစာနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ အူရောင် ရောဂါ။ သောက်ဆေး ၂၀၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ လေးကြိမ်။ ၂-၃ ပတ်အတွင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို မကျေနပ်ပါက ဆေးအချိုးကို နှစ်ဆ တင်နိုင်သည်။ သောက် ဆေး တစ်နေ့ လေးကြိမ်ကို ၄၀၀ မီလီဂရမ်ထက် မကျော်စေရ။
ပန်းနာရောဂါ ဖောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် တစ်နေ့ လေးကြိမ် ပေးပါ။ cromolyn sodium ကို လေ့ကျင့်ခန်း၊ လေညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်သော ပန်းနာရောဂါအတွက် သုံးနေပါက လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်မီ သို့မဟုတ် မထိတွေ့မီ ၁၀-၁၅ မိနစ် ( သို့သော် ၁ နာရီထက် မကျော်စေရ) တွင် သုံးပါ။
ထိခိုက်သော မျက်လုံးတွင် များသောအားဖြင့် တစ်နေ့ လေးကြိမ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း အသုံးပြုပါ။ ၃လလောက်ကြာသည်အထိ ဆက်သုံးနိုင် သည်။
ကလေးတွေအတွက် Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၂နှစ်အောက်။ ဘေးကင်းမှုနှင့် အကျိုး သက်ရောက်မှုကို အတည်ပြုထားခြင်း မရှိပါ။
၂-၁၂ နှစ်။ သောက်ဆေး ၁၀၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ လေးကြိမ်။ တစ်နေ့ ၄၀ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် ထက် မကျော်စေရ။ အစာမစားမီနှင့် မအိပ်မီ မိနစ် ၃၀ အလိုတွင်သောက်ပါ။
အသက် ၁၂နှစ် အထက်။ သောက်ဆေး ၂၀၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ လေးကြိမ်။ အစာ မစားမီ မိနစ် ၃၀ အလို။ ၂-၃ ပတ်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာများ ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက တစ်နေ့ ၄၀ မီလီဂရမ်/ ကီလိုဂရမ် အထိ တိုးပါ။
အစာနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့် အူရောင် ရောဂါ
အသက် ၂နှစ်အောက်။ ထောက်ခံမှု မရှိပါ။
၂-၁၂ နှစ်။ အစပိုင်းတွင် ၁၀၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ လေးကြိမ်။ ၂-၃ ပတ်အတွင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို မကျေနပ်ပါက ဆေးအချိုးကို နှစ်ဆ တင်နိုင်သည်။ သောက် ဆေး တစ်နေ့ လေးကြိမ်ကို ၄၀၀ မီလီဂရမ်ထက် မကျော်စေရ။
Cromolyn (ခရိုမိုလင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Cromolyn ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
Cromolyn nebulizer/ metered-dose inhaler: ၂၀ မီလီဂရမ်/မီလီလီတာ
Cromolyn ဆေးတောင့် ၁၀၀ မီလီဂရမ်
Cromolyn မျက်စဉ်း ၄၀ မီလီဂရမ် ( ၄ ရာခိုင်နှုန်း)
Cromolyn သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။